Akụkọ - ntụnyere ngwa nke capsules osisi na capsules oghere
1. A na -eji Hydroxypropyl methylcellulose dị ka onye na -ahụ maka ọgwụ, a na -ejikwa ya ebe niile dị ka ihe nrachi mbadamba na onye na -ahụ maka mkpuchi sel. A na -a withụ ya n'ọtụtụ ọgwụ, ọ nweghịkwa ntụkwasị obi.
2. Hydroxypropyl methylcellulose bụ kemịkal kwụsiri ike, ọ naghị eji ikuku na mmiri emeghachi omume na kemịkal, cellulose anaghị arụ ọrụ nke ọma, yabụ etinyeghị ya n'ahụ ma ọ na -apụkwa n'ahụ. Ọ dịghị mfe itolite microorganisms, yabụ n'okpuru ọnọdụ nkịtị, ọ gaghị emebi ma mebie mgbe echekwara ogologo oge.
3. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere capsules oghere gelatin ọdịnala, capsules akwụkwọ nri nwere uru nke mmegharị sara mbara, enweghị ihe ize ndụ nke mmeghachi omume njikọta, na nkwụsi ike dị elu. Ọsọ mwepụta ọgwụ siri ike kwụrụ chịm, na iche ndị mmadụ n'otu n'otu pere mpe. Mgbe etisasịsịrị n'ahụ mmadụ, ọ naghị amịkọrọ ya, ọ nwere ike wepụta ya na nsị.
N'ihe banyere ọnọdụ nchekwa, mgbe ọtụtụ ule gasịrị, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara imebi n'okpuru ọnọdụ iru mmiri dị ala, na ihe mkpuchi nke mkpuchi capsule ka kwụ chịm n'okpuru oke iru mmiri, na ndepụta dị iche iche nke capsules osisi n'okpuru ọnọdụ nchekwa adịghị emetụta. .
Capsules Gelatin dị mfe ịrapara na capsules n'okpuru ọnọdụ iru mmiri dị elu, na -esi ike ma ọ bụ na -emebi emebi n'okpuru ọnọdụ iru mmiri dị ala, ma dabere na ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri na ihe nkwakọ ngwaahịa nke gburugburu ebe nchekwa.
4. Mgbe etinyere osisi hydroxypropyl methylcellulose n'ime shei capsule, ọ ka nwere echiche ebumpụta ụwa. Akụkụ bụ isi nke capsules nwere oghere bụ protein, yabụ ọ dị mfe ịmụpụta nje na microorganisms. Ekwesịrị ịgbakwunye ndị na -echekwa ihe n'oge usoro mmepụta, ka enwere ike nwee ntakịrị ntakịrị ihe nchebe nke paraben na capsules, ekwesịrị ịhọrọ ngwaahịa ikpeazụ tupu nkwakọ ngwaahịa. Mgbapụta site na usoro oxyethane iji hụ na njikwa microbial nke capsule. Maka capsules oghere gelatin, chloroethanol bụ akara na -achịkwa nke ọma. Capsule osisi adịghị mkpa ịgbakwunye ihe nchekwa ọ bụla na usoro mmepụta, ọ dịghịkwa mkpa ka etylene oxide, nke na -edozi nsogbu nke ihe fọdụrụ na chloroethanol.
5. Ọchịchọ maka capsules osisi ga -enwe usoro ito ngwa ngwa n'ọdịnihu. Ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe omume ka capsules akwụkwọ nri dochie ọnọdụ kachasị dị na capsules gelatin, capsules akwụkwọ nri nwere uru asọmpi doro anya na nkwadebe ọgwụ ọdịnala China, nkwadebe ihe oriri na nri arụ ọrụ. Ha nwere oke ọbara, enweghị ihe ọghọm nke mmeghachi omume na-ejikọ ọnụ, nkwụsi ike dị elu, Uru dị ka enweghị mmiri mmiri.